ခွေးအသုံးအဆောင်များ - Mundo Perros | ကမ္ဘာ့ခွေးများ
ခွေးကမ္ဘာကြီးဟာအများကြီးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိသည် ဒီနေ့လွယ်ကူအောင်အရာအမျိုးမျိုးကို သူတို့နှင့်အတူ။ ယင်းသည်လူ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမဟုတ်သည်မှာအချည်းနှီးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သမျှကိုသူရထိုက်သည်။ အပိုပစ္စည်းများကိုပိုမိုပေးသောကမ္ဘာတွင်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ခြင်း၏အလုပ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအသုံးပြုမှုဖြင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုခွဲခြားနိုင်သည်။
အ ပစ္စည်းများ ခွေးအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မသာကမ္ဘာကြီးကိုဆိတ်ကွယ်ရာဖြစ်ပါသည် utility ကို ဤအအစီရင်ခံ, ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ကြောင်း ဗေဒ။ en Dogs World ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်အကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့လိမ့်မည် သဘောထားတွေ ခွေးတစ်ကောင်ကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်လာ သို့မဟုတ်ခွေးပေါက်စနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူခွေးများအတွက်ခွေးများ၊ ကော်ရဲရား, ၏အသုံးပြုမှု ကဗျာမျက်စိအတွင်းတိမ်၏အတွင်းပိုင်းမျက်ကပ်မှန် ထီးခွေးများအတွက်လိင်ကစားစရာများပင်။
အားလုံးအကြောင်းပြောဆိုရန်မဖြစ်နိုင်ဘူး တည်ရှိကြောင်းခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းကျနော်တို့အမျိုးအစားနှင့်အညီအချို့အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်သုံးသည့်အသုံးအဆောင်များမှသင်၏တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် (သို့) အံ့သြစရာကောင်းပြီးဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ခွေးနှင့်အတူတစ်နေ့တာအခြေခံပင်ဖြစ်ကြောင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများအစုတခုပါဝငျသညျ။ ခွေးအိမ်ပြန်မလာခင်မှာငါတို့မှာအိမ်အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ထားရပြီးပြီ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ နေ့စဉ်ခွေးတစ်ကောင်နှင့်ဘာလိုအပ်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်သည်။ ဦး ဆုံးအနေနှင့်အခြေခံအရာတစ်ခုဖြစ်သည် ခွေးအိပ်လိမ့်မည်နေရာတစ်ခုထားပါငါတို့အဘို့အလိုလိမ့်မည်အရာ ခွေးအိပ်ရာ။ လောလောဆယ်မရေမတွက်နိုင်သောမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။ ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလပ်စတစ်အိတ်များ၊ အထူးသဖြင့်အမြှုပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခွေးများအတွက်အဆင်ပြေသောအိပ်ရာခင်းများဖြင့်ထည်ဖြင့်အိပ်ရာခင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံသဏ္withာန်ရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်စတုဂံပုံကုတင်များနှင့်ကုတင်များကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးအထက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာခွေးအရွယ်အစားကိုစဉ်းစားဖို့လိုပြီးအိပ်ရာကသူ့အတွက်အဆင်ပြေစေမှာပါ။
သူတို့နေ့စဉ်သုံးမည့်နောက်ထပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ အ ခွေး feeders နှင့်ရေလောင်း။ ပလတ်စတစ်တွေရှိပေမယ့်သတ္တုပစ္စည်းတွေကအမြဲတမ်းပိုပြီးထောက်ခံပါတယ်၊ ခွေးများအားလုံးနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဟုထင်ရသူအချို့သည်ခြေရင်းတွင်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများမပါသည့်ခွေးများစားသုံးနေစဉ်အစာကျွေးခြင်းမှခွေးများကိုဆွဲယူခြင်းမှတားဆီးသည်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအရာများ၊ ဥပမာလိုအပ်သည့်အစားအစာများထောက်ပံ့ပေးသောအစာများရှာဖွေရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ခွေးတစ်ကောင်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထားခဲ့မှသာအသုံးပြုသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, လမ်းလျှောက်ခွေးများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လုပ်ရပါလိမ့်မယ် လမ်းလျှောက်သွားရန်သူ၏ leash နှင့်ကော်လာသို့မဟုတ်ကြိုးကို ၀ ယ်ပါ။ ဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလုံးကမ္ဘာကြီးဟာငါတို့ရှေ့မှာပွင့်လင်းလာတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အရာကဝယ်ဖို့ပါ ခွေးများအတွက်လည်ဆွဲ ၎င်းသည်အရွယ်အစားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်း၊ ခွေးသည်ဆွဲ။ ကြီးမားခြင်းရှိပါက၎င်းသည်အဆင်ပြေ။ ခွေးကြီးထွားလျှင်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိစေရန်။ ပိုကောင်းသောခြောက်လှန့်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သောအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောကြိုးကြိုးများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ မြင်းခွာများသည်အလွန်လူကြိုက်များလာသည်။ သို့သော်ခွေးကိုများများဆွဲပါကမထောက်ခံပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်တစ်ကိုယ်လုံးနှင့်လည်ပင်းနှင့်သာမက leash ကဲ့သို့ပင်တစ်ကိုယ်လုံးနှင့်ဆွဲသောအခါအလွန်နှေးကွေးခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သိုင်းကြိုးနှင့် တွဲဖက်၍ ယနေ့အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သောလွယ်အိတ်အိတ်နှင့်အတူမစင်အိတ်များကိုလည်းလိုအပ်သည်။
အ ကစားစရာများသည်ခွေး၏နေ့စဉ်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဒါဆိုငါတို့ကမင်းကိုဝယ်လို့ရအောင် အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည် ခွေးငယ်လေးများအတွက်ပျော့ကစားစရာ ကြိုးသို့မဟုတ်ဘောလုံးနှင့်အတူကစားစရာရန်။ ရှာဖွေမှုအများဆုံးမှာအထဲမှာဆုကိုဝှက် ထား၍ ကြာမြင့်စွာဖျော်ဖြေခွင့်ပြုသည့်ကစားစရာများဖြစ်သည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်ခရီးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်အသုံးဝင်သောအသုံးအဆောင်အချို့ကိုထည့်ရန်အမြဲလိုအပ်သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးအစားများအကြောင်းသင့်အားပြောပြပြီးပါပြီ ခွေးသယ်ဆောင်ထို့ကြောင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့်အိတ်၊ ကျောပိုးအိတ်သို့မဟုတ်သတ္တုလှောင်အိမ်ဖြစ်စေရွေးချယ်ရမည်။ နေရာများစွာတွင်၎င်းကိုသယ်ဆောင်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောအရာဖြစ်သော်လည်းခွေးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလှည့်လည်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။
La ကားထိုင်ခုံများအတွက်အဖုံး နောက်ပြီးကြီးကျယ်တဲ့တီထွင်မှုတစ်ခုကတော့တိရိစ္ဆာန်တွေရှိသူတိုင်း ၀ ယ်သင့်တယ်။ ခွေးကိုယူပြီးကားကိုနာရီပေါင်းများစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ရှောင်ရှားရန်ထိုင်ခုံအဖုံး၊ အထူးသဖြင့်ဆံပင်များများကျလျှင်။ ခွေးအော့အန်လျှင်ပင်၎င်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ အတော်လေးတီထွင်မှု။
ကမ္ဘာကြီး ခွေးအဝတ် ဒါဟာအစအလွန်ပြည့်စုံ post ကိုစေသည်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာငါတို့ရှာပါ အလုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးအစားခွေးအဝတ်မိုးရွာခြင်းမှကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်သားမွေးအနည်းငယ်သာရှိသောခွေးများအတွက်နွေးထွေးသောအဝတ်ကဲ့သို့သော။ အထူးသဖြင့်လှပသောဒီဇိုင်းများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောဝတ်စားဆင်ယင်နည်းများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဖက်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်ခွေးအဝတ်အစားများကိုအသုံးပြုရန်လမ်းကြောင်းလည်းရှိသည်။ ခွေး၏ဖိနပ်များကိုတွေ့ရလေ့ရှိပြီးနှင်းဖုံးနေသည့်ခွေးများတွင်မူသူတို့၏ pads များကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
ခွေးသန့်ရှင်းရေးသည်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်စျေးကွက်တွင်ရှိသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အရေးအပါဆုံးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည် ခွေးဖြီး။ သင်၌ဆံပင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး ၀ ယ်ရမည်။ အလွှာနှစ်ထပ်ရှိသောအမွေး၊ ရှည်သော၊ ကောက်ကောက်သို့မဟုတ်ကြမ်းသောဆံပင်အတွက်အထူးစုတ်တံများရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောဆံပင်တိုများရှိလျှင်၎င်းအားဖြိုရန် mittens ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူစေပါသည်။
ငါတို့ထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် ကျနော်တို့နည်းနည်းသက်သာစေရန်အိမ်မှာဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းချင်တယ်, ငါတို့တစ် ဦး ဝယ်နိုင်ပါတယ် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။။ စက်၊ ကတ်ကြေးနှင့်အမျိုးမျိုးသောခေါင်းများပါဝင်သောအလွန်ပြည့်စုံသောအရာများရှိသည်။ ဒီနည်းနဲ့ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ခွေးတွေကိုဖန်တီးသူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအသုံးအဆောင်များအနက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအရာများကိုရှာဖွေနိုင်သည် သွားသန့်ရှင်းရေးကိရိယာ။ ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး၊ သွားများကိုစုံလင်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေစေမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုလာရောက်လည်ပတ်မှုနည်းပါးစေပါသည်။
ယနေ့ရရှိနိုင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်လိုအပ်ချက်များစွာကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းစတိုးများကိုစူးစမ်းလေ့လာပါကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ဝယ်နိုင်သည် un သွက်လက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း မင်းရဲ့ခွေးကဒီအားကစားကိုစပြီးလေ့ကျင့်ဖို့၊
ခွေးရေချိုးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ- သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်သည်။
por နတ် Cerezo လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
သင့်ခွေးကို ရေချိုးပေးခြင်းသည် ရယ်စရာကောင်းသော အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်စေနိုင်သည် (အထူးသဖြင့် သနားစရာကောင်းတာက မကြိုက်ရင်...
ခွေးများအတွက် လက်တွေ့ကျပြီး သယ်သွားနိုင်သော ခရီးအသုံးအဆောင်များ
Cuenca ကို ခရီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အဝေးက Black Forest ကို သွားလည်ရင် နွေရာသီ နီးလာပြီ...
ခွေးဘောလုံးများ၊ သင့်သူငယ်ချင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ခွေးတွေအတွက် ဘောလုံးဆိုတာ ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ ခွဲလို့မရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ၊ အဲဒါတွေကို ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ဘယ်နှစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး...
por နတ် Cerezo လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
ရီစရာလို့ထင်ရပေမယ့် ခွေးတွေအတွက် အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်က အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အလွန်လိုအပ်ပါတယ်...
ခွေးသွားတိုက်တံများသည် ကျွန်ုပ်တို့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ သွားနှင့်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။…
အမျိုးအစားအားလုံး၏အကောင်းဆုံးခွေး poop scoopers
Dog poop scoopers များကို သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ အကြီးဖြစ်စေပေါ်မူတည်၍ နှစ်မျိုးခွဲလေ့ရှိသော်လည်း...
por နတ် Cerezo လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
ခွေးစောင်များသည် ဆိုဖာ၏ အကာအရံများအဖြစ် သို့မဟုတ် ကုတင်ပြုလုပ်ရန် စွမ်းဆောင်နိုင်ရုံသာမက…
ခွေးအစာများ- သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် အရသာရှိသော အစားအစာများ
por နတ် Cerezo လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
ခွေးအစာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို နေ့စဉ်ပေးသော အစာပြီးနောက် ပုံမှန်အပိုင်းဖြစ်သည်...
ခွေးလေးတွေ ထိုင်ခုံခါးပတ် ပတ်ထားဖို့က ခွေးလေးတွေနဲ့ တွဲသွားတဲ့အခါ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့...
ခွေးများအတွက် အကောင်းဆုံးအဖုံးများ- ၎င်းတို့သည် အဘယ်အရာနှင့် သင့်ခွေးကို ၎င်းတို့နှင့် ရင်းနှီးစေမည်နည်း။
por နတ် Cerezo လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
Dog pads တွင် အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များ နှစ်ခု (အဓိကအားဖြင့် ဆီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းသွားခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်) နှင့်...
ခွေးများအတွက် စက်ဘီးခြင်းတောင်း၊ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို သက်တောင့်သက်သာ လုံခြုံစွာ သယ်ဆောင်သွားပါ။
စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ဂေဟဗေဒဝါသနာရှင်များအတွက်၊ ခွေးများအတွက် စက်ဘီးခြင်းတောင်းသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်...